iOS 11.2 နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုလူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
နာရီအနည်းငယ်အကြာ Cupertino မှယောက်ျားများသည် iOS 11.2 ၏ဆဌမ beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊ Apple ကဒုတိယအကြီးမားဆုံး iOS update နံပါတ် ၁၁.၂ ကိုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်သည်Apple Pay Cast ကိုအဓိကအသစ်အဆန်းအဖြစ်ယူဆောင်လာသည့် update တစ်ခု၊ update update တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသကဲ့သို့
ဒီဒုတိယကြီးမားတဲ့ update ကို၏ကျန်၏ကျန် ဂဏန်းတွက်စက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသသော bug ကိုထိခိုက် အလွန်လျင်မြန်စွာတွက်ချက်မှုများပြုလုပ်သောအခါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကာတွန်းလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ခလုတ်ရိုက်ချက်များနှင့် iPhone မော်ဒယ်အသစ်များအတွက်ကာတွန်းနံရံကပ်နံရံအသစ်များချန်လှပ်ထားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဒီဒုတိယကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ update ကကျွန်တော်တို့ကိုယူလာတဲ့နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုကို wireless charging မှာတွေ့နိုင်တယ် ၎င်းသည် 7,5w charger များနှင့် iPhone 8, iPhone 8 Plus နှင့် iPhone X တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အိုင်ဖုန်းအားလုံးအတွက်ငြိမ်သက်သောနောက်ခံပုံအသစ်များထပ်ထည့်ထားသည်၊ အချို့သော emojis များတိုးတက်လာပြီး subscription app များအတွက်ရွေးချယ်စရာအသစ်များလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
Apple Pay Cash နှင့် ပတ်သက်၍၊ ကျွန်ုပ်သည်သတင်းမထုတ်ပြန်မီ၎င်း၏လည်ပတ်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့သော်လည်းသီအိုရီအရအမေရိကန်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်း၏ Premiere သည် Apps Pay ကိုလက်ရှိရရှိနိုင်သည့်နိုင်ငံအားလုံးတွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်update ကိုမှတ်ချက်ချကတည်းကကတည်းကသူက၎င်း၏ရရှိနိုင်ဖော်ပြသည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူမျှမသဲလွန်စရှိသည်သောအရာ၏ iCloud ဖြင့်သတင်းများကိုထပ်တူပြုခြင်း၊ ဒီနှစ် WWDC မှာ Apple တင်ပြခဲ့တဲ့အသစ်အဆန်းတွေထဲကတစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အခုထိမမြင်သေးတဲ့ဘဝရဲ့လက္ခဏာတွေတောင်မှမတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာဒီအားသာချက်ကိုခံစားနိုင်မယ့်အနာဂတ်မွမ်းမံမှုတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေရမယ်ဆိုတာအားလုံးကပြနေပါတယ်။
Apple ကနောက်ဆုံး beta ကိုစဖွင့်ပြီးနောက် ၁၁.၂ နာရီအကြာတွင်နောက်ဆုံး iOS ကိုထုတ်လွှင့်ရန်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ မကြာသေးမီက Cupertino တွင်အလွန်ထူးဆန်းသောအရာများဖြစ်ပျက်နေသည်ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့မအံ့သြသင့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 11.2 နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုလူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်သည်
မနက်ဖြန်တိုင်အောင် Wifi ဆက်သွယ်မှုလိုင်းပြတ်သွားပြီး control စင်တာမှ deactivate !!!!
ဒီဒဏ်newာရီ / လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကဘာလဲ ????
WIFI နှင့် Bluetooth ကိုပိတ်ထားသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား "မနက်ဖြန်အထိအဆက်ပြတ်သွားမည်" ဟုပြောပြသည်။
ငါ updated ပါပြီဘယ်နေရာမှာမမြင်ရ Apple Pay ငွေကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Apple Pay ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်မလားသိလား။ ဒါမှမဟုတ် Apple Pay နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အကြွေးဝယ်ကဒ်မရှိရင်တောင်အဲဒါကိုသုံးလို့ရလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Apple Pay Cash လို့တောင်ပြောရင်တောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရနိုင်တယ်။ အကယ်စင်စစ်သူတို့မမျှော်လင့်ဘဲဒီ update ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြသကဲ့သို့, update ကို၏ဖော်ပြချက်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှညှိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါ 50 မိနစ်အကြာက update လုပ်ပါပြီနှင့်မျက်နှာပြင်ပန်းသီးနှင့်အတူကွက်လပ်အလွတ်ဖြစ်ပြီးထိုအရပ်မှတတ်၏။ ၎င်းသည်မိနစ် ၄၀ ကြာအောင်ဤသို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုးတက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သနည်း။
ငါ vol- နှင့်ပါဝါခလုတ်ကိုနှင့်အတူ reboot ပါပြီကြောင့်အလုပ်လုပ်!
Andrés de Angelis ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ iPhone 8 Plus သည်ယမန်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်တစ်စုံတစ် ဦး အားထပ်မံပြုလုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်လော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Andrés de Angelis သို့ပြန်သွားပါ
ငါ့မှာ iPhone SE နဲ့ iOS11.2 ရှိတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၂း၃ ရက်ကတည်းကငါ့ကိုချိတ်ဆွဲပြီးစကားဝှက်ကိုအမြဲတောင်းတယ် !! ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
iOS 11.2 Beta6ကို developer များနှင့် Public Beta အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ